သတငျး Archives - Page 182 of 195 - Kachin News Group (KNG) ,
ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရာတွင် ခွင့်ပြုမိန့်ထက် ပိုလွန်ကာ စာသားအပို ကိုင်ဆောင်ခြင်းနှင့် လာရောက်ဝန်းရံသူများ၏ တီရှပ်အကျီ တို့ကြောင့် တာဝန်ခံ ၂ ဦးကို ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၂၀ ဖြင့် ယနေ့မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်တရားရုံးတွင် တစ်ဦးလျှင်ငွေဒဏ် ၂သောင်းစီဖြင့် အပြီးသတ်စီရင်ခဲ့ပါသည်။ ကချင်စစ်ရှောင်များ၏ ခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့် တရားစီရင်မှု မမျှတမှုကို မီးမှောင်းထိုးပြသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကို မြစ်ကြီးနားတွင် ၃ ရက်သာ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့တွင် စာသားအပိုကိုင်ဆောင်မှု
မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့မှ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ခတ်ရပ်ထားကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ (၉)ရက် နေ့မှာပဲ မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့်တိုက်ပွဲ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့အနီး တစ်နာရီခန့် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Dah Shi Hpang Wawm (ဒါရှီးဖန်ဝေါမ်) ဆိုသည့် ရွာနား ညီနောင်မဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့ခေါ် တအာင်း TNLA၊ ကိုးကန့် MNDAA နှင့် ရခိုင် AA တပ်ပေါင်းစုကို မြန်မာစစ်တပ်မှ လိုက်လံပစ်ခတ်မှုကြောင့် အချိန် ၁နာရီခန့်
ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဌ Rev. Dr. Hkalam Samson အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေဖြင့် တပ်မတော်မှ တရားစွဲဆိုရန် မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးမှာ ဦးတိုက်လျှောက်ထားမှု ကို စက်တင်ဘာ (၉)ရက် ယနေ့ ပြန်လည် ရုတ်သိမ်းသွားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာစစ်တပ် မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (မပခ) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထိုက် က တရားလိုပြုကာ Rev. Dr. Hkalam Samson ကို အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နှင့်တွေ့ဆုံစဉ်
ထောင်ဒဏ် ၁၅ရက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရခြင်းကြောင့် တရားသူကြီးကို ချိန်ခွင်ပျက်တစ်ခု ပေးခဲ့သော ကချင်လူငယ် ကိုပေါလုကို မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်တရားရုံးက ယနေ့ ထောင်ဒဏ် ၃လ ထပ်မံ ချမှတ် လိုက်ပါသည်။ လမ်းဘေးတေးသရုပ်ဖော်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုပေါလုနှင့် မဆိုင်းနူးပန် တို့၂ဦးကို ယခုအပတ် တနလာင်္နေ့ ထောင်ဒဏ် ၁၅ရက် ချမှတ်ခဲ့သည့်အပေါ် တရားမျှတမှုမရှိကြောင်း အမှတ်အသားအဖြစ် ကိုပေါလု က တရားသူကြီး ဦးသန်းထွန်းအား ချိန်ခွင်ပျက် ပေးခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်
လက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသော မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ် (၃)ဖွဲ့နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ် တို့က ပြည်သူလူထုကို အကာကွယ်ပေးသည့် နိုင်ငံတကာစစ်ဥပဒေကို လိုက်နာရန် ပြည်တွင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ သြဂုတ်လ (၃၁)ရက်နေ့ ကွတ်ခိုင်မြို့အနီးတိုက်ပွဲတွင် မော်ဟစ်(Mawhik) ကျေးရွာထဲ လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကလေးငယ် (၂)ဦး အပါဝင် ကချင်ရွာသား (၅)ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ အဖွဲ့အစည်း ၃၀၀ ကျော် ထောက်ခံပါဝင်သော အဆိုပါတောင်းဆိုမှုတွင် “တိုက်ပွဲများအား ချက်ချင်း ရပ်တန့်ရန်၊ အရပ်သားများအား
စစ်ရှောင်အရေးလှုပ်ရှားသူ ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင် ၂ ဦးကို ငြိမ်းစုစီ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၁၅ ရက် ချမှတ်လိုက်သည့် တရားစီရင်မှုသည် မျှတမှုမရှိကြောင်း ကချင်လူငယ်များ၏ ၃ ရက်သာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ယနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ ပထမနေ့ အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်တု ပန်ခြံရှေ့၊ စက်တင်ဘာလ ၆ရက်နေ့တွင် MPT ဖုန်းရုံးရှေ့ နှင့် စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်တရားရုံးရှေ့
ကချင်စစ်ဘေး (၈)နှစ်ပြည့် လမ်းဘေးတေးသရုပ်ဖော် လှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ခဲ့သော ကချင်လူငယ် (၂)ဦးကို စက်တင်ဘာလ (၂)ရက်၊ ယနေ့ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်တရားရုံးမှ ထောင်ဒဏ် (၁၅)ရက် စီရင်ချက် ချလိုက်သည်။ ကို Paw Lu နှင့် မ Seng Nu Pan တို့အား အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံလျှင် ငွေဒဏ် ၃ သောင်း၊ အပြစ်မရှိကြောင်းငြင်းဆိုလျှင် ထောင်ဒဏ် (၁၅)ရက် ရွေးချယ်ရန် တရားရုံးမှစီရင်လိုက်ခြင်း အပေါ် လူငယ်ခေါင်းဆောင်
မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ယမန်နေ့ည မိုးသည်းစွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့် မြေမြင့်၊ ထွယ်ဆန် နှင့် ယုဇန စသည့် ရပ်ကွက်များရှိ နေအိမ်အချို့တွင် ရေဝင်ရောက်မူရှိနေပြီး သွားလာရေးအထိ ခက်ခဲနေကြကြောင်း ရေဝင်ရောက်မူ ကြုံတွေ့နေကြသည့် မိသားစုများထံမှ သိရသည်။ "ခုအိမ်ထဲထိပါ ရေကဝင်လာပြီ ပိုကြီးလာတယ် လမ်းမှာဆို ခါးလောက်ရှိတယ်။ ဆက်ရွာနေရင်တော့ ဒီမှာနေလို့မရနိုင်တော့ဘူး။ ဆိုပြီး မြေမြင့်ကွက်သစ်မှ ဒေါ်သူဇာက ဆိုသည်။ မိုးရေကြီးမှုကြောင့် မြစ်ကြီးနား မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အချို့ လမ်း၊ လူနေအိမ်များသို့ ရေဝင်ရောက်ပြီး စာသင်းကျောင်းအချို့လဲ
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့် အစိုးရ၏ အောင်မြင်သာစုစည်းရွာသို့ အတင်း ရွှေ့ပြောင်းခံရသည့် မုဆိုးမ တစ်ဦး၏နေအိမ် ဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေသောကြောင့် အမြန်ဆုံး ပြုပြင်ပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်း ဆိုပါသည်။ အောင်မြင်သာ၊ ရပ်ကွက် (၇)မှ မုဆိုးမ ဒေါ် Hkawn Tawng ၏ နေအိမ်သည် မူလကတည်းက ပျက်စီးနေရာမှ ပြီးခဲ့သည့် မေလ (၁၉)ရက်နေ့မှာ ပြင်းထန်သောလေ တိုက်ခတ်မှုနှင့် ထပ်မံ ကြုံခဲ့ရသောကြောင့် နေထိုင်၍မရအောင် ပျက်စီးရခြင်းဖြစ်သည်။ “အိမ်က
အထက်မြန်မာပြည် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုနှင့် သြဂုတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ ဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှ ကျေးရွာထဲ ပစ်ခတ်သော လက်နက်ကြီးကြောင့် ကလေးငယ် (၂)ဦး အပါဝင် ကချင်ရွာသား (၅)ဦး သေဆုံးခဲ့သည်။ မော်ဟိတ်ရွာထဲ ကွတ်ခိုင်အခြေစိုက် ခြေလျင်တပ်ရင်း (ခလရ) ၂၄၁ မှ ပစ်ခတ်လိုက်သော ၁၂၀ မမ လက်နက်ကြီး (၃)လုံး ကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့စဉ် ရွာသား (၅)ဦး သေဆုံးပြီး အခြား (၃)ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာ